खप्तड बाबा महत्पूर्ण भनाईहरु 'म र मेरो कर्तव्य' - Suvham News
मेरो विचारमा कुनै पनि मानिसले बिर्सन नहुने र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा यही छ कि सांस्कृतिक स्वाधीनता नै वास्तविक स्वाधीनता हो.
(‘म र मेरो कर्तव्य’ बाट उद्रितांश)
जुन जातिले आफ्नो संस्कृति, आफ्ना महापुरुषहरू र आफ्ना सत् साहित्यहरूप्रति अश्रद्धा गर्दछ त्यो जाति प्राय: नष्ट नै हुने गर्दछ.
(‘आत्मज्ञान’ बाट उद्रितांश)
मुख्य कुरा यही छ कि अनेक जातिले एकपटक गुमाइसकेको राजनीतिक स्वाधीनता समय र परिस्थितिले साथ दिँदा पुन: फर्काएका छन्. तर एकपटक गुमिसकेको धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परा अपरिवर्तित र पूर्ण रूपमा कायम गर्नु पूर्णरूपमा कायम गर्नु कुनै पनि समुदायको जीवनमा प्राय: असम्भव छ.
( बाट उद्रितांश)
आज तँ अरूको कर्तव्यमा दृष्टि राख्तछस् र त्यसद्वारा आफ्नो अधिकारलाई सुरक्षित देख्न चाहन्छस्. यही सारा अशान्तिको मूल हो. तेरो स्वतन्त्रता त आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नमा नै छ. अरूले आफ्नो कर्तव्य पालन गरुन् यो तेरो अधीनको कुरो होइन.
(‘धर्म-विज्ञान’ प्रथम खण्डबाट उद्रितांश)
Tagged आजको विचार, नेपाली भाषा, बिचार/ब्लग
Prevजरोकिलो महाअभियानको संकल्प दिवस २०७५
NextShare Tweet Ma Durga is the ultimate iconic form, present in every expression, movement and mood, natural and supernatural.